विपतको बेला समाजिक सेवामा बतास समूह | Business TV Nepal
विपतको बेला समाजिक सेवामा बतास समूह
अध्यक्ष आनन्दराज बतास आफै ट्रक चलाएर गाइ संरक्षणमा
कोरोना लकडाउनको समयमा पनि बतास फाउन्डेसन सडकमा अलपत्र परेका गाई र बाच्छा संरक्षण अभियानमा लागि परेको छ । बतास अर्गनाइजेसनले आफ्नो परोपकारी संस्था बतास फाउन्डेसनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई गाइ संरक्षण अभियानमा साथ दिन ट्रक र पिकअप समेत उपलब्ध गराएको छ ।
बतास फाउन्डेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतास आफै अभियानमा आफैले ट्रक चलाएर सडकका गाईबाच्छा व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरेका छन् । अध्यक्ष बतासले आफैले ती गाइबाच्छाहरु ट्रकमा राखी गन्तव्यसम्म पु¥याउने गरेका छन ।
अध्यक्ष बतासले आफु सहित २ वटा ट्रक, एक पिकअप तथा ६ जना जनशक्तिसमेत उपलब्ध गराएको जनाएका छन् । मंगलबार यो अभियान अन्तर्गत ४० खुला चौपाया समातिएको र एक साताभित्र ५ सय गाईबाच्छाको व्यवस्थापन गर्ने योजना रहेको पनि बतासले जनाएका छन् ।
हाल काठमाडौंको बालाजुदेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्म गरी सो संख्याका गाई र बाच्छाको उद्धार गरिएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले जानकारी दिए । उद्धार गरिएका गाईलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको उत्तरी कुनामा रहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरापालिका– ८ स्थित गोठाटारको बागमती किनारको चौरमा राखिएको छ । उद्धारमा फाउन्डेसनका अध्यक्ष बताससहित पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष डा. प्रदीप ढकाल, कोषाध्यक्ष डा. मिलन थापालगायत सक्रिय छन् ।
त्यसैगरी बतास फाउन्डेसनले बागमती पुल नजिक ५ जोडी बर पिपल रोपेको जनाएको छ । बतास अर्गनाइजेसनद्धारा सञ्चालित होटल आनन्दको प्रतिबद्धता अनुसार सो वृक्षारोपण गरिएको बतास अर्गनाइजेसनले जनाएको छ ।
फाउन्डेसनले गाइबाच्छा उद्धारका क्रममा अलपत्र परेका मान्छेको समेत उद्धार गरेको छ । लकडाउनका कारण घर फर्कने साधन नपाएर बाटोमा अलपत्र परेका यात्रुहरुलाई ट्रकमा राखेर सिन्धुली छेउसम्म पुराइदिएको बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्द बतासले बताएका छन् ।
बतास अर्गनाइजेसन नेपालको सबैभन्दा ठूलो परोपकारी संस्था हो । अघिल्लो पटक महाभुकम्पबाट धनजनको क्षति भएका सिन्धुपाल्चोक , नुवाकोट लगाएतका पिडित नागरिकहरुलाई समेत बतास फाउन्डेसनले ठूलो मात्रामा सहयोग गरेको थियो ।